Mitsva tambo tambo uye € 10 mutengo pawebhusaiti yeApple | Ndinobva mac
Mutsva tambo mavara uye € 10 mutengo pawebhusaiti yeApple
Iyo Cupertino kambani inowanzoita shanduko kupfuura zvinoratidzwa ivo pachavo pawebhusaiti uye mune ino kesi maawa mushure mekuuya kwepamutemo kweiyo nyowani 16-inch MacBook Pro modhi tinoziva kuti mitengo ye iyo Loop neMitambo tambo dzakadzikisa mutengo wavo kubva ku59 kusvika ku49 euros.
Pamusoro pekudzikiswa kwemutengo, kambani inowedzera mavara akati wandei mumutambo wemitambo uye (PRODUCT) RED mune iyo Loop modhi. Pasina mubvunzo aya mavara ndeeashoma munhau dzinonyatsosimbisa kuderera kwema 10 euros mumutengo wemabhande, zvese zviri zviviri 40 uye 44mm.
Mitengo yemabhande aya izvozvi sezvatiri kutaura kuma49 euros uye kunyangwe chiri chokwadi hachisi kudzikisira kukuru, kutanga kwakanaka mune iro Apple uye mabhande epakutanga. Izvi saka a kuvhurwa kwemavara matsva emabhanhire akaderedzwa. Kuswedera kwemwaka weKisimusi uye pamwe kufarira kwaApple mukuwana kutengesa kwepamusoro kwakasimudzira kudzikiswa kwemutengo wekutengesa kuruzhinji.
Ichokwadi kuti tinazvo kwakawanda kupihwa kwechitatu bato tambo uye tambo kutevedzera ekutanga Apple iwo mune network, asi zvine musoro kuti mabhanhire aya haafanire kupfuura ekugadzira maApple epakutanga, kunyangwe chiri chokwadi kuti vanoita basa ravo nemazvo uye ini pachangu ndine anopfuura rimwe risati riri Apple rekutanga. Ndinovimba muitiro uyu wekudzikisa uye kunyangwe kubata mitengo kunyangwe iri mhando nyowani (sezvataona ne16-inch MacBook Pros) inoenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mutsva tambo mavara uye € 10 mutengo pawebhusaiti yeApple
Iyo icon yeAirPods padhuze nemidziyo yese pawebhusaiti yeApple
Apple iri kufunga kupa Apple Music, Apple TV + uye Apple Music muchikamu chimwe chete